မိုင်းဖုန်း ဆရာတော်ကြီး ၏ ဝါတွင်းကာလ သုံး မကုန်အောင် လာဘ်လာဘငွေဝင်စေမဲ့ အဓိဌာန် ပြုလုပ်နည်း – Zartiman
Zar Ti Man | August 15, 2020 | Knowledge | No Comments
မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ကြီးက ဝါဝင်တဲ့နေ့က စပြီး ဂူ အထဲမှာ တပါးတည်း ဝစီပိတ် ကျင့်ကြံအားထုတ်ပြီးတော့ ကျနော် တို့က လပြည့်၊လ ကွယ် နေ့ တိုင်း သစ်သီးဝလံ သွားပို့ပေးတာ၊ အဲဒီမှာ ဆရာတော်က ကျန်းမာရေး အခြေအနေ ဘာညာဆိုရင် စာနဲ့ ရေးခဲ့တယ်” လို့ ဆရာ တော် ရဲ့ တပည့် ဒကာရင်းဖြစ်သူ ဦးမောင်မောင် (လားရှိုး) က ပြောပြပါတယ်။
ဒီနှစ် ဆရာတော် ဂူအောင်း တရားအားထုတ်တဲ့နေရာဟာ အရင်နှစ်က ဂူအောင်းတဲ့ နေရာကနေ ကားနဲ့ နာရီဝက်ခန့် သွားရပြီး ဂူရှိတဲ့ တောင်ခြေမှာ ကားရပ်ကာ တနာရီလောက် လမ်းထပ်လျှောက် ရပါသေးတယ်။မိုင်းကျက်ချောင်းဘေးက ဂူဟောင်း အနီးမှာတော့ ဆရာ တော်ကို ဖူးမျှော်လိုသူတွေ၊ ဆရာတော်ရဲ့ တရားနာလိုသူတွေ ရာပေါင်းများစွာ ညအိပ် စောင့်ဆိုင်းနေကြပြီး၊ ငွေကြေးချမ်းသာသူ အချို့က တော့ နားခိုဖို့ နေအိမ်တွေပါ ဆောက်လုပ်ထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။
ဝါတွင်း (၃)လ ရက်ပေါင်း(၉၀)စိပ်တဲ့ ကိုးနဝင်းပုတီးစိပ်နည်းလေး ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
စိပ်ရမဲ့ ရက်လေးတွေ သက်မှတ်ပြီး ပါပြီ ဒုတိယ ဝါဆိုလပြည့်နေ့(ဓမ္မစကြာနေ့မှ သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့)ထိဖြစ်ပါတယ် သက်သတ် လွတ်လည်း စားစရာ မလို ပါဘူး အချိန်လည်း တိတိကျကျ စိပ်စရာမလိုပါဘူး နေ့တိုင်း မှန်မှန်စိပ်ဖို့ပဲလို ပါတယ်ရှင့် စိပ်မဲ့ နေ့ရက်များ ၉ပါးစလုံး ကိုနေ့တိုင်း တစ်ပတ်စီ
ဝိဇ္ဇာစရဏ သမ္ပန္နော (၁)ပတ်
အနုတ္တရော ပုရိသ ဒမ္မသာရထိ (၁)ပတ်
သတ္ထာဒေဝ မနုဿာနံ (၁)ပတ်
3.. 8 . 2020. မွ 11. 8 . 2020 အထိ
12.8 .2020 . မွ 20 . 8 . 2020 . အထိ
21 . 8 . 2020. မွ 29 . 8 . 2020 . အထိ
ဝိဇ္ဇာစရဏ သမ္ပန္နော သိဒ္ဓိ (၉)ပတ်
30. 8 . 2020 . မွ7.9. 2020 .နေ့ အထိ
8 . 9. 2020 . မှ 16 .9. 2020. နေ့အထိ
17 . 9. 2020 . မှ 25.9. 2020. နေ့အထိ
26 .9. 2020. မှ 4. 10 . 2020. နေ့အထိ
5 . 10 . 2020 . မွ 13. 10 . 2020 . အထိ
14 . 10 . 2020. မွ 22. 10 . 2020 . အထိ
23. 10 . 2020. မွ 31. 10 . 2020 . အထိ
Nyein Hay That
မိုငျးဖုနျးဆရာတျောကွီးက ဝါဝငျတဲ့နကေ့ စပွီး ဂူ အထဲမှာ တပါးတညျး ဝစီပိတျ ကငျြ့ကွံအားထုတျပွီးတော့ ကနြျော တို့က လပွညျ့၊လ ကှယျ နေ့ တိုငျး သဈသီးဝလံ သှားပို့ပေးတာ၊ အဲဒီမှာ ဆရာတျောက ကနျြးမာရေး အခွအေနေ ဘာညာဆိုရငျ စာနဲ့ ရေးခဲ့တယျ” လို့ ဆရာ တျော ရဲ့ တပညျ့ ဒကာရငျးဖွဈသူ ဦးမောငျမောငျ (လားရှိုး) က ပွောပွပါတယျ။
ဒီနှဈ ဆရာတျော ဂူအောငျး တရားအားထုတျတဲ့နရောဟာ အရငျနှဈက ဂူအောငျးတဲ့ နရောကနေ ကားနဲ့ နာရီဝကျခနျ့ သှားရပွီး ဂူရှိတဲ့ တောငျခွမှော ကားရပျကာ တနာရီလောကျ လမျးထပျလြှောကျ ရပါသေးတယျ။မိုငျးကကျြခြောငျးဘေးက ဂူဟောငျး အနီးမှာတော့ ဆရာ တျောကို ဖူးမြှျောလိုသူတှေ၊ ဆရာတျောရဲ့ တရားနာလိုသူတှေ ရာပေါငျးမြားစှာ ညအိပျ စောငျ့ဆိုငျးနကွေပွီး၊ ငှကွေေးခမျြးသာသူ အခြို့က တော့ နားခိုဖို့ နအေိမျတှပေါ ဆောကျလုပျထားကွတာတှရေ့ပါတယျ။
ဝါတှငျး (၃)လ ရကျပေါငျး(၉၀)စိပျတဲ့ ကိုးနဝငျးပုတီးစိပျနညျးလေး ဖျောပွလိုကျပါတယျ။
စိပျရမဲ့ ရကျလေးတှေ သကျမှတျပွီး ပါပွီ ဒုတိယ ဝါဆိုလပွညျ့နေ့(ဓမ်မစကွာနမှေ့ သီတငျးကြှတျလပွညျ့နေ့)ထိဖွဈပါတယျ သကျသတျ လှတျလညျး စားစရာ မလို ပါဘူး အခြိနျလညျး တိတိကကြ စိပျစရာမလိုပါဘူး နတေို့ငျး မှနျမှနျစိပျဖို့ပဲလို ပါတယျရှငျ့ စိပျမဲ့ နရေ့ကျမြား ၉ပါးစလုံး ကိုနတေို့ငျး တဈပတျစီ
ဝိဇ်ဇာစရဏ သမ်ပန်နော (၁)ပတျ
အနုတ်တရော ပုရိသ ဒမ်မသာရထိ (၁)ပတျ
သတ်ထာဒဝေ မနုဿာနံ (၁)ပတျ
3.. 8 . 2020. မှ 11. 8 . 2020 အထိ
12.8 .2020 . မှ 20 . 8 . 2020 . အထိ
21 . 8 . 2020. မှ 29 . 8 . 2020 . အထိ
ဝိဇ်ဇာစရဏ သမ်ပန်နော သိဒ်ဓိ (၉)ပတျ
30. 8 . 2020 . မှ7.9. 2020 .နေ့ အထိ
8 . 9. 2020 . မှ 16 .9. 2020. နအေ့ထိ
17 . 9. 2020 . မှ 25.9. 2020. နအေ့ထိ
26 .9. 2020. မှ 4. 10 . 2020. နအေ့ထိ
5 . 10 . 2020 . မှ 13. 10 . 2020 . အထိ
14 . 10 . 2020. မှ 22. 10 . 2020 . အထိ
23. 10 . 2020. မှ 31. 10 . 2020 . အထိ
သွေး ထွက်အောင် မှန်ကန်နေ တဲ့ နိမိတ်တဘောင်နှင့် ယနေ့မြန်မာပြည်ကြီး၏ အခြေအနေ